‘सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी परामर्शदातालाई पत्याउँदैन’ - UrjaKhabar ‘सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी परामर्शदातालाई पत्याउँदैन’ - UrjaKhabar
बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ यस क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेको छ । २०६६ साल असारमा स्थापना भएको कम्पनीले सयभन्दा बढी आयोजनामा काम गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकमा समेत काम गरेकाले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसमेत बनेको छ । कम्पनीको सक्रियता, स्वदेशी तथा विदेशी आयोजनामा काम गरेको अनुभव तथा भावी योजनाबारे कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोहर श्रेष्ठसँग ऊर्जा खबरकी धना ढकालले गरेको कुराकानीको संक्षेप :
बिपिसी अन्तर्गत हाइड्रो कन्सल्टलाई अलग्गै कम्पनी बनाउने योजना कसरी बन्यो ?
२०२२ साल (सन् १९६६) मा बिपिसी स्थापना भयो । सुरुदेखि नै यसभित्र ‘हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ’ समूह थियो । यसले जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाता भएर काम गरिरहेको थियो । पहिलो पटक एक मेगावाटको तिनाउमा काम गर्यो । पाँच सय किलोवाटको तिनाउलाई एक मेगावाट बनाइयो । यसपछि आँधीखोला, झिमरुकलगायत आयोजना निर्माण भए ।
स्थापना भएको २४ वर्षपछि सन् १९९० (२०४६/४७) मा बिपिसीको निजीकरण भयो । निजीकरणपछि त्यहाँभित्र ‘हाइड्रो कन्सल्ट विङस्’ बन्यो । र, विङस्ले निजी क्षेत्रका आयोजना अध्ययन गर्न थाल्यो । बिपिसी निजीकरणसँगै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिन सुरु भयो । निजी लगानीमा बनेको पहिलो आयोजना खिम्तीमा हाइड्रो कन्सल्टले काम गरेको हो ।
कम्पनीका लागि यो ठूलो अवसर थियो । यसपछि नियमित काम गर्ने अवसर मिलिरह्यो । यस अवधिमा नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड (एनएचई), हाइड्रो ल्याबलगायत कम्पनी स्वायत्त भइसकेका थिए । यसैले पनि हाइड्रो कन्सल्ट अलग्गै कम्पनी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो । यसबीचमा पिपल इनर्जी एण्ड इन्भायरोमेन्ट डेभलपमेन्ट एसोसियसन (पिडा) जन्मियो । हाइड्रो कन्सल्टलाई पिडामा लैजाने कुरा चल्यो । तर, धेरै कर्मचारी भर्खरैको नयाँ कम्पनीमा जान मानेनन् ।
अलमलमै करिब १० वर्ष बित्यो । म पनि हाइड्रो ल्याब गएँ । काबेली ‘ए’ आयोजना अघि बढ्ने भएपछि बिपिसीले मलाई बोलायो । त्यही समयमा हाइड्रो कन्सल्ट प्रमुखले छोडेकाले प्रमुख जिम्मवारी दिइयो । २०६६ साल असार (सन् २००९) मा छुट्टै कम्पनी स्थापना भयो । हामी बिपिसीबाट अगल हुँदा तीन आयोजनाको काम लिएर निस्किएका थियौं । अहिले कम्पनीले एक दशक यात्रा पूरा गरिसकेको छ ।
अहिले कम्पानीले के–के काम गर्दै आएको छ ?
जलविद्युत आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनिङ, पूर्वाधार अध्ययन, सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल र प्रसारण लाइनलगायत संरचनाको बोलपत्र आह्वानका कागजात तयार गर्छ । साथै, बोलपत्रमा परेका आवेदनको मूल्यांकन, अनुगमन तथा नियमन र आवेदन दिने ठेकेदारका कागजातको समीक्षा गर्ने काम हुन्छ । आयोजनाको टोपोग्राफी, सर्वेक्षण, भौगर्भिक नक्साङ्कन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, प्राविधिक तथा वित्तीय लागत विश्लेषण एवं प्रमाणीकरण र सुपरभिजन गर्ने गरिएको छ ।
कति आयोजनामा काम गरियो ?
बिपिसीमै रहँदादेखि अहिलेसम्म काम गरेका आयोजनाको संख्या सयभन्दा बढी पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा मात्र ५० भन्दा बढी आयोजनामा काम गरिएको छ । हाम्रो परामर्शमा अघि बढेका केही आयोजना निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अधिकांश आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
कम्पनीले कति मेगावाटसम्मका आयोजनामा काम गरिरहेको छ ?
पाकिस्तानमा ४ सय ४६ मेगावाटको आयोजनामा काम भइरहेको छ । यो अहिलेसम्म काम गरेमध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । साधारण हाइड्रोलोजी मात्र हेर्दा पाँच सय मेगावाटसम्मका आयोजना हामी आफैं अध्ययन गर्न सक्छौं । तर, हाइ हेड (बढी उचाई) र भर्टिकल साफ्ट भएको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको परामर्श चाहिन्छ ।
कम्पनीले पाकिस्तान र अफ्रिकी देश केन्यासम्म पुगेर काम गरेको छ । यो अवसर कसरी मिल्यो ?
सुरुदेखि निजी क्षेत्रका आयोजनामा केन्द्रीत भएर काम गर्दै आएका थियौं । अनुभवकै आधारमा विदेशी प्रवद्र्धकसँग जोडिन पुगियो । र, केन्यासम्म कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने अवसर पाइयो । केन्याको ५.६ मेगावाट ‘गुरा’मा काम गरेका छौं । यसमा कम्पनीले निर्माणाधीन आयोजनाको नियमन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
पाकिस्तान खैबर पख्तुन प्रान्तमा दुई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । कम्पनीले अध्ययन गरेका एक सय १० मेगावाटको गाब्रल कलम र ४ सय ४६ मेगावाटको कारी मुस्खुर निर्माणाधीन छन् । अन्य दुई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
पाकिस्तानमा विदेशी विज्ञ परामर्शदाता भएर काम गरिरहेका छौं । पाकिस्तानले अध्ययन गरेका आयोजनामा विज्ञको रूपमा परामर्श दिइएको छ । आयोजनाको ‘ले आउट’ तयार भएपछि हामीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं । एक महिनापछि हाम्रो टोली फेरि पाकिस्तान जाँदैछ ।
स्वदेशी र विदेशी प्रवद्र्धकसँग काम गर्दा के फरक हुँदो रहेछ ?
विदेशीसँग काम गर्दाको राम्रै अनुभव छ । पाकिस्तानमा प्रान्त सरकारसँग मिलेर काम गरेका थियौं । २ सय ३८ मेगावाटको आयोजना अध्ययन गर्न दिइएको थियो । बीचमा ‘फल्ट लाइन’ भेटियो । यसको क्षमता केही बढी हुने देखियो । जसअनुसार आयोजनाको क्षमता २ सय ६० मेगावाट पुग्यो ।
फल्टको तल्लो तटमा ३ सय ५० मेगावाटको अर्को आयोजना निस्कियो । त्यहाँ झन्डै ६ सय १० मेगावाटका आयोजना बन्ने देखियो । हाम्रो काम देखेर पाकिस्तानीहरू निकै खुसी भए । पाकिस्तानमा हाइड्रो कन्सल्टप्रति अझै विश्वास बढ्यो । हाम्रो पनि आत्मविश्वास बढेको छ ।
केन्यामा काम गर्न निकै सजिलो भयो । त्यहाँ वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन पास हुन दुई महिनाभन्दा बढी समय नलाग्ने रहेछ । नेपालमा वर्षौं लाग्ने गरेको छ । आयोजनाको काम गर्दै जाँदा नेपालमा जस्तो सम्झौतामा जे छ त्यही हुनुपर्छ भन्ने अडान नराखी अध्ययन वा तथ्यअनुसार काम गर्न सकिने हुँदा धेरै सहज छ । त्यहाँ सम्झौताभन्दा दुई वर्ष ढिलो काम सुरु भएको थियो । हामीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्यौं । दाबी अनुसार प्रवद्र्धकले सजिलै क्षतिपूर्ति दियो । तर, नेपालमा काम सुरु गर्न ढिलो भए क्षतिपूर्ति दाबी गरेर पाउनु असम्भव जस्तै छ ।
नेपाल र पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्था मिल्दोजुल्दो भए पनि अफ्रिकाको फरक छ । भिन्न भूगोलले आयोजनाको डिजाइनमा के फरक पार्दो रहेछ ?
नेपाल र पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्था धेरै हदसम्म समान छ । तर, जलविद्युत अध्ययन गर्ने शैली भिन्नता रहेछ । पाकिस्तानीहरू सुक्ष्मरूपमा आयोजना अध्ययन गर्ने रहेछन् । सानो भन्दा सानो कुरामा ध्यान दिन्छन् । यहाँ स्थलगत निरीक्षणपछिमात्र काम सुरु हुन्छ । उनीहरू पहिले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेर आयोजनास्थलमा जान्छन् । उनीहरु कागजी काम (पेपर वर्क) बढी गर्छन् । यो पाकिस्तानको राम्रो पक्ष लाग्यो । हाइड्रोलोजीको हकमा हामीले काम गरेको क्षेत्र अलि सुख्खा छ, धेरै पानी नपर्ने हिमाल पारीको हाम्रो मनाङ र मुस्ताङ जस्तो ।
केन्या नेपाल र पाकिस्तानभन्दा फरक छ, भूगोल र भौगर्भिक अवस्था पनि । त्यहाँ दुई वटा मनसुन हुन्छ । यसले हाइड्रोलोजीको ग्राफ नै फरक बनाउँछ । हिउँद र बर्खाको मनसुन हुन्छ । त्यो यहाँको भन्दा फरक लाग्यो । त्यहाँ डिजाइन गरेका आयोजना हामीले हेरेर अन्तिम रूप दिएका थियौं । हामीले डिजाइन गर्ने आयोजना भूकम्प प्रतिरोधी हुने हुँदा अलि बाक्लो र मोटो आउँथ्यो । तर, त्यहाँका ठेकेदारले एकदमै पातलो संरचना राखेर डिजाइन तयार गरेका थिए ।
डिजाइन र हाइड्रोलोजी हाम्रो भन्दा फरक हुन्छ । गुरामा हामीले ठेकेदारले तयार गरेको डिजाइन हेरेर अन्तिम रूप दिने काममात्रै गरेका थियौं । अफ्रिकीसँग काम गर्न निकै सहज भएको थियो । केन्या र पाकिस्तानमा ठेक्का सम्झौता अनुसार काम गरेको रकम लिन पनि सहज छ । नेपालमा बरु निकै बहाना र ढिलासुस्ती गर्ने संस्कार छ ।
हाइड्रो कन्सल्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पत्याए पनि यहाँ विदेशीको दबदबा छ । ठूला सरकारी आयोजनामा काम गर्न हाम्रो क्षमता नपुगेको हो ?
नेपाली कम्पनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्श सेवा दिन सक्षम छन् । तर, विदेशी कम्पनी यहाँ आएर काम गरिरहेका छन् । विदेशमा स्थानीय कम्पनीलाई नेतृत्व दिएर सुपरभिजन गर्नमात्रै बाहिरको परामर्शदाता बोलाउने गरिन्छ । यो संस्कारको थालनी यहाँ पनि हुन जरुरी छ । स्थानीय परामर्शदाताले ८० प्रतिशत काम गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यस्तो नीति बनेर कार्यान्वयन भए विदेशमा बसेर काम गरिरहेका नेपाली विज्ञहरू स्वदेश फर्केर काम गर्ने वातावरण बन्छ । ठूला जलाशय आयोजनाका लागि भने अझै पनि विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
स्वदेशी कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन कस्तो मापदण्ड तोकिन्छ ?
स्वदेशी परामर्शदाताका लागि ७० देखि ८० मेगावाटको आयोजनामा कडा मापदण्ड राखिएको हुन्छ । ठूला आयोजनामा लेखिएको क्षेत्राधिकार हुबहु सार्ने प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र सरकारी लगानीका आयोजनामा दोहोर्याएर प्रतिस्पर्धा आह्वान भइरहेको छ । यसको कारण कठिन मापदण्ड हो । स्वदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नै पाउँदैनन् । र, विदेशीकोे हातमा आयोजना जान्छन् । विस्तारै सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । स्वदेशी आयोजनामा स्थानीय परामर्शदातालाई अनिवार्य गरी विदेशीलाई पनि बोलाउने पद्धति सुरु गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म नेपाली परामर्शदाताको संख्या कति छ ?
५-७ वटा परामर्शदाता कम्पनी छन् । सानिमा, इटेको, जेड कन्सल्ट, एन्जेलले सक्रियरूपमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको सहायक एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी पनि आएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको समेत आफ्नै परामर्शदाता छ ।
स्वदेशी परामर्शदाताका समस्या के छन् ?
निजी क्षेत्रका आयोजनामा काम गर्न साना कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । लागत धेरै हुँदैन । थोरै बजेटमा चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुँदा राम्रो मार्जिन बस्दैन । यो हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रवद्र्धकले गुणस्तरीय काम खोजे पनि अन्त्यमा पैसामै गएर कुरा रोकिन्छ । ठूलो दक्ष टोली राखेर सेवा दिँदै आए पनि यो क्षेत्र अझै व्यवसायिक हुन सकेको छैन । जो थोरै पैसामा काम गर्न तयार हुन्छ उसैलाई काम दिने परम्परा छ । हतारमा थोरै बजेटमा काम सक्ने संस्कारले परामर्शदाताको सेवा गुणस्तरीय र दिगो हुन सकिरहेको छैन ।
निजी क्षेत्रका धेरै जलविद्युत केन्द्रले जडित क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । गलत डिजाइनले हो वा के हो ?
क्षमता अनुसार विद्युत उत्पादन नहुनुमा धेरै कारण हु सक्छन् । एउटा कारण त हाइड्रोलोजीको वास्तविक तथ्याङ्क पाउन नसक्नु हो । भएका तथ्याङ्क पनि वास्तविक हुँदैनन् । सम्भाव्य नदेखिएको आयोजना पनि स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ भन्दै निर्माण गरिन्छ । यसले समेत ऊर्जा उत्पादनमा फरक परिरहेको छ । कहिले काहीँ हाइड्रोलोजी म्यानिपुलेट गर्ने गरिन्छ । यसो हुँदा क्षमता जति उत्पादन हुँदैन । साना आयोजनाको सम्भव नहुँदा नहुँदै पनि क्षमता बढाउन कोसिस गरिन्छ । यसले गदा पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुँदैन । केही प्रवर्द्धकले सुरुमा आशावादी भएर धेरै ऊर्जा राख्ने र पछि ऊर्जा नपुग्ने हुन्छ ।
कम्पनीका भावी योजना के छन् ?
निजी क्षेत्रका केही आयोजनामा काम गर्न प्रस्ताव तयार गरेका छौं । केहीमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । जिम्मा लिएका आयोजना पूरा गर्ने र नयाँ लिने नियमित प्रक्रिया हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर ठूला आयोजनामा काम गर्ने योजना छ । नेपालबाहिर पनि काम गर्ने प्रयास छ । हामीले जलविद्युत बाहेकका सिँचाइ, सहरी विकास योजना र खानेपानी आयोजनामा पनि काम गर्ने गरी आफ्नो दायरा बढाउँदैछौं । एउटै क्षेत्रमा मात्रै काम गर्दा बढी जोखिम हुने र सीमित काम हुने हुँदा दायरा बढाउने योजना छ ।